दोस्रो रामधुनी गोल्डकपको उपाधि डिसिटि सुनसरीले जित्यो -
दोस्रो रामधुनी गोल्डकपको उपाधि डिसिटि सुनसरीले जित्यो
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष १४, २०७५ समय: १३:०७:१६
झुम्का,पौष १४। दोस्रो रामधुनी गोल्डकपको उपाधि डिसिटि सुनसरीले उचाल्न सफल भएको छ । शनिवार भएको फाईनल खेलमा आयोजक रामधुनी आदर्श संस्थालाई २–० गोलले पराजित गर्दै डिसिटि सुनसरीले उपाधि जितेको हो ।
गोल्डकपमा प्रथम हुने समुहलाई नगद रु १ लाख १ हजार सहित सिल्ड र ट्रफिले सम्मान गरेको छ । दोस्रो हुने आयोजकले नगद रु ५१ हजार सिल्ड सहित सम्मानित भएको हो । प्रतियोगीताको म्यान अफ दि सिरिज आयोजकका खेलाडी नवराज कार्की घोषित भए । खेल अवधिभरीमा सर्वाधिक गोल कर्ता डिसिटिका निशान लिम्बु हुदै दुवैलाई सिल्ड सहित नगद रु ५ हजारका दरले सम्मान गरेको हो । फाईनल खेलमा म्यान अफदि म्याच उमेश राई भए । खेलको दोस्रो हाफमा लगतै डिसिटिका लिम्बुले १ गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । केहि समयमै उमेश राईले दोस्रो गोल गर्दै जित दिलाए ।
आदर्श संस्थाका अध्यक्ष केशव बहादुर खड्काको सभापतित्वमा भएको पुरस्कार बितरण कार्यक्रममा प्रतिपक्षिदलका नेता राजिव कोईराला,रामधुनी नगर प्रमुख जयप्रकास चौधरी,वडा नं. ४ का अध्यक्ष मनेश चौधरी,मल्टि सोलुशन कन्ट्रक्शन प्रालि र न्युधनलक्षमि हार्डवेयरका फौद सिंह थापाले बितरण गरे । त्यसैगरी मेजवान रेष्टुरेन्ट एण्ड बारका नबिन चौधरी अमयका सेन्टरका अजय चौधरीले बितरण गरेका थिए । रामधुनी वडा नं. ४ सिक्दार माझि टोल ईक्राही खेल मैदानमा भएको सो प्रतियोगीतामा बिदेसि टिम दार्जिलिङ भारत सहित ८ समुह सहभागी थिए ।
सहभागीलाई प्रथम पुरस्कार नगद र सिल्ड मल्टिसोलुशन कन्ट्रक्शन प्रालि र न्युधनलक्षमि हार्डवेयर,दोस्रो पुरस्कार सुनसरी क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधि सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले उपलब्ध गराएका थिए भने म्यान अफदि सिरिजको पुरस्कार राशि राष्ट्रिय खेलाडी सुरेन्द्र श्रेष्ठले उपलब्ध गराएका थिए । खेल सम्पन्नकालागी राधुनी नगरपालिका लगायत बिभिन्न संघ संस्था,उधोगी,ब्यापारीले सहयोग गरेका थिए । सहयोगी सम्पुर्णलाई अध्यक्ष खड्काले प्रतियोगीता समापन गर्दै धन्यवाद ब्यक्त गरे ।